သင့် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သရဲ တွေ တကယ်ရှိနေသလား ??? - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / သင့် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သရဲ တွေ တကယ်ရှိနေသလား ???
သင့် ပတ်ဝန်းကျင် မှာ သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သရဲ တွေ တကယ်ရှိနေသလား ???
Apann Pyay 7:39 PM ပရလောကအကြောင်း Edit
သင် သရဲ၊ တစ္ဆေ တွေကို ယုံပါသလား ?
ဒါဟာလူတိုင်းမေးလေ့ရှိကြတဲ့ မေးခွန်းပါ၊ သရဲ ၊ တစ္ဆေနဲ့ ၀ိညာဉ်ဆိုတဲ့ အရာတွေ တကယ်ရှိမရှိဆိုတာဟာ ရှေးယခင်ကတည်းကနေ ယနေ့ထက်တိုင် ငြင်းခုန်နေကြဆဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ ယနေ့ရှင်သန်နေတဲ့ လူသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က သရဲရှိတယ်ဆိုတာကို မယုံဘူးလို့ မငြင်းကြပါဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ဝက်ကတော့ သိပ္ပံနည်းကျရှင်းပြနိုင်တဲ့ ကိစ္စများကိုသာ ယုံကြည်ပြီး၊ ၀ိညာဉ်လောကဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေပါလို့ ထင်မြင်ယူဆထားကြပါတယ်။
သရဲကို ယုံမယုံမစဉ်းစားခင်၊ သရဲ ဆိုတာဘာလည်းလို့ မေးကြည့်ရအောင်..
ယေဘူယျအားဖြင့် သရဲဆိုသော အယူအဆက၊ လူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ရှင်သန်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု သေဆုံးသွားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခန္ဓာမရှိတဲ့အခြေအနေ၊ တမလွန်ဘ၀ တစ်ခုလို့ လူအများက ယူဆထားကြပြီး အများစုသော ဘာသာရေးအယူအဆများထဲမှာလည်း တစ္ဆေ၊ သရဲ၊ နတ်၊ မှင်စာ နဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးသတ္တ၀ါတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုတွေရှိနေတက်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်၊ စုန်း၊ သမန်းဝံပုလွေ၊ သမန်းကျား ယုံကြည်ကြောက်ရွံ့သူတွေတောင် ရှိပါသေးတယ်။ သရဲဆိုတာ မသေခင်ဘ၀မှာ မဖြစ်မြောက်လိုက်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို စွဲလမ်းပြီး၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သေမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုလို့ အများအားဖြင့်ယူဆပါတယ်။ ရုပ်ကမ္ဘာကနေ၊ စိတ်ဝိညာဉ်ကမ္ဘာသို့ အကူးအပြောင်း၊ သရဲခြောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ အရိပ်တွေ၊ အသံတွေ၊ အနံ့တွေ၊ အငွေ့တွေ၊ အမြင်နဲ့ ခြောက်လှန့်မှုတွေ စသဖြင့် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လူသားတွေရဲ့ ကြောက်လန့်မှုကို အရယူတက်ပါတယ်။ေ
သသွားတဲ့ ခန္ဓာတိုင်း သရဲ ဖြစ်သလား?
ဒီလိုလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ အဲ့လိုသာဆို ဟိုးး ကမ္ဘာဦးထဲက ယနေ့ထိသေဆုံးသွားတဲ့ လူတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကပြည့်နေမှာပေါ့။ ဒီလိုဆိုတော့ သရဲ ဟာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဘယ်အချိန်မှာကံကုန်တယ်၊ နောက်ဘ၀ဆိုတာရှိမရှိ၊ ၀ိညာဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုများ သီးသန့်ရှိနေသလား နောက်ဘ၀မရောက်ခင် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ မှာ လူ တိုင်းဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသလားဆိုတာ ရှုပ်ထွေးပွေလီပြီး၊ အဖြေမထုတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။
သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် လေ့လာသူများဟာ ၀ိညာဉ်တွေဘာလို့ ၎င်းတို့ရဲ့ မူလဘ၀ကို မစွန့်ခွာနိုင်ကြသလဲ၊ ဘာလို့ သရဲခြောက်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အောက်ပါအခြေခံအကြာင်း အချက်တွေကြောင့်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
-၀ိညာဉ် များဟာ ၎င်းတို့ တည်ရှိနေကြောင်း အသိပေးရန်။ (မြန်မာအယူအဆအရ အမျှဝေစေရန်)
-ထို ၀ိညာဉ် များဟာ သရဲ အခြောက်ခံရတဲ့သူနဲ့ သူတို့နဲ့ သီးခြားဆက်စပ်နေတဲ့ ဆက်သွယ်မှု့တွေရှိနေလို့ဖြစ်စေ။
-သို့မဟုတ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ သေမှန်းမသိ သေသွားရတဲ့ ဖြစ်စဉ်များကြောင့်၊ ၎င်းတို့ သေဆုံးသွားပြီဆိုတာကို မသိရှိပဲ၊ သက်ရှိဘ၀များနဲ့ ဆက်သွယ်ခြင်း။
ဒီနေ့ခေတ် နည်းပညာ မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ၊ အပူချိန်၊ အလင်း၊ လှုပ်ရှားမှု့ နဲ့ အသံအာရုံခံစနစ်တွေ ပါဝင်တဲ့ ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ ကိရိယာတွေနဲ့ သရဲရှာပုံတော်ဖွင့်ကြတဲ့ သူတွေလည်း အများအပြားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး၊ သရဲရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းကို သက်သေပြဖို့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ နောက်ထပ်အယူအဆတစ်ခုက ၀ိညာဉ်များကို လှိုင်းများအဖြစ်ယူဆပြီး၊ ရှင်သန်နေခဲ့သောလူသားတစ်ဦးရဲ့ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လှုပ်ရှားသွားလာမှု့ လှိုင်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်လှိုင်းများက အီနားရှားနိယာမအရ ထိုသူသေဆုံးသွားသည့်တိုင် ဆက်လက်ကျန်ရှိနေပြီး အဆောက်အဦးထဲထွင် ဆက်လက်ရိုက်ခတ်နေကာ သရဲခြောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထိုသို့သော အဖြစ်မျိုးက အိုဟောင်းသော ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးများမှာ အဖြစ်များပြီး၊ ထိုကဲ့သို့ ထုကြီးထည်ကြီး အဆောက်အဦးမျိုးက လှိုင်းများကို ပိုမိုထိန်းထားနိုင်စွမ်းရှိလို့ပါ။
သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် လေ့လာသူများဟာ သရဲ၊ တစ္ဆေ ရှိခြင်း မရှိခြင်းအတွက် အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းတွေသုံးပြီးရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ TAPS ဆိုတဲ့ သရဲ ရှာဖွေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က စိန့်အော်ဂတ်စ်တင်း မီးပြတိုက်သို့သွားရောက်ခဲ့ကာ အဆောက်အဦးကြားထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အသံနဲ့ အရိပ်ပြမှု့တွေကို ဖမ်းယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ပါလာတယ်ဆိုတဲ့ ၀ိညာဉ်ပုံတွေလည်း အများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးထားတာလား၊ တကယ့်အစစ်အမှန်ပဲလားဆိုတာတော့ မသိနိုင်ပါဘူး။ သရဲကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ဖူးပါတယ်ဆိုပြီး ထွက်ဆိုရှင်းလင်းသူများလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အချို့သောအယူသည်းသူများကတော့ သရဲ၊ တစ္ဆေ များကို ဆဌမအာရုံ နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်သူများလည်း ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားခြင်းတွေ သေဆုံးကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ ဘယ်ဘ၀ရောက်နေမလဲဆိုတာကို ထိုကဲ့သို အာရုံခံနိုင်သည်ဟူ ပြောဆိုသူများထံ မေးမြန်းကြမှု့များ အများအပြားရှိပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ တစ္ဆေ၊ သရဲဆိုတာ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ကြည့်ဖူးသလို လူသားများကို ဒုက္ခပေးတဲ့ လူသတ်ကောင် များပါလို့ တစ်ထစ်ချ ပြောလို့မရပါဘူး။ ယုံကြည်တယ်ဆိုသူများအတွက် ၃၁ဘုံမှာ ကျက်စားကြသော ဘ၀များထဲက ဘ၀တစ်ခုလို့သာ မှတ်ယူထားသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိရဲ့ ကြောက်စိတ်ကလည်း တစ္ဆေ၊ သရဲ များကို အလိုလိုပုံဖော်ပြီး မျက်လုံးထဲ မြင်သလိုလိုဖြစ်တက်ပါတယ်။ ယုံကြည်သူများနဲ့ မယုံကြည်သူများအကြား တစ္ဆေတကယ်ရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီး၊ လေ့လာဖော်ထုတ်ကြမည့်သူများလည်း ပေါ်ပေါက်လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ သင့်ကိုလည်း တစ်ခုလောက်ပြန်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ သင်ရော သရဲ၊ တစ္ဆေများကို ယုံကြည်သူတစ်ဦးလား ??
Credit: အောင်ခန့် (မိုမိုလေး)